အခြားဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
နံပါတ်စဉ် Adobe Photoshop cc ။ Skazhiteeeeeeeeeee တကယ်စွန့်ခွာချင်ဖို့လိုအပ် navsegdaaaaa
ငါ EXIF ​​ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုရှုမြင်ကြဘူး
Showexif ဓာတ်ပုံအတွက် Exif ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ၎င်းသည်မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိသောသို့မဟုတ်၎င်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောပရိုဂရမ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဓာတ်ပုံကိုအင်တာနက်မှမယူပါက၊
ကွယ်လွန်သူ၏ဓာတ်ပုံကိုတစ်ထောင့်တွင်အနက်ရောင်ခါးပတ်ဆွဲထားဖို့ရှိသည်? အဘယ်မှာရှိပါကသတ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ ထူးခြား ... ညာဘက်အောက်ခြေတွင်စီးများသောအားဖြင့် (ဆွေမျိုးကျွန်တော်တို့ကို) အထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်အပေါ်ဆွဲထားကြ၏။ ပေမယ့် ...
charger မိသားစုဆရာဝန် PowerBank လျင်မြန်စွာ3ညွှန်ပြချက်နှစ်မိနစ်အဘို့အနီတက်ထွန်း, ပြီးတော့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, ကဘာလဲ?
charger မိသားစုဆရာဝန် PowerBank လျင်မြန်စွာ3ညွှန်ပြချက်နှစ်မိနစ်အဘို့အနီတက်ထွန်း, ပြီးတော့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, ကဘာလဲ? အများစုမှာဖွယ်ရှိဘက်ထရီပြီးသားအပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတူမှတ်ဉာဏ်ရှိသည်။ အနီရောင်မီးလုံးအပြေး Prekrasno.Indikator ...
ကြှနျတေျာ့ကှနျပွူဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာမမြင်ရသနည်း? prompt ။ ငါက nashol usb ကနေတစ်ဆင့် Laptop ကိုမှ tsifravik ထားပေမယ့် folder ကိုအချည်းနှီးသောကပြောပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ nm ၌ရှိသကဲ့သို့, ကင်မရာကိုမမွငျစခွေငျးငှါ ...
plagiarism မပါဘဲဓါတ်ပုံနေဆဲဘယ်လို plagiarism ပေါ်မှဓါတ်ပုံကိုစစျဆေးဖို့ရှိပါတယ်? သငျသညျစာရေးသူအနေဖြင့်တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်မဝယ်လျှင်, source code ကိုကြည့်ဖို့မေးမြန်းဖို့ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ လျောက်ပတ်သောကင်မရာများရေးသားခဲ့သော ekzif မှတ်တမ်းတင်နိုင်ကြသည် ... ။
flash drive တစ်ခုမှဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ကြည့်ရမည်နည်း။ nubuck တွင်၎င်းကို memory slot ထဲသို့ထည့်ပြီး nubuck ကိုကြည့်ပါ။ nubuck သည်ဖိနပ်များနှင့်ပရိဘောဂများပြုလုပ်ထားသည့်သားရေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘယ်မှာ Lightroom ရုရှား၏လွတ်လပ်သောဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်။ link တစ်ခုပေးပါ။
ဘယ်မှာ Lightroom ရုရှား၏လွတ်လပ်သောဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်။ link တစ်ခုပေးပါ။ cwer.ru ကို Adobe Photoshop ကို Lightroom 4.1 အိတ်ဆောင်ရုရှားဗားရှင်း http://www.adobe.com/ru/products/photoshop-lightroom.html Laytrum အခမဲ့ download ပြုလုပ်တိုက်ရိုက်လင့်ခ် http://shareflare.net/download/29740.2884d448ca5eda324b7fb989fe9a/2kravv38.exe ဟုတ်ကဲ့ .html, ဟုတ်တယ်, ရှိတစ်ဦးကို download လုပ်ပါ ...
တစ်ဦးကိုလှိမ့ရှပ်တာကဘာလဲ? ဒါဟာပုံရိပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပြသကြသောအခါ, frame ကိုလုပ်မယ့်လမ်းဖွင့်ပေမယ့်မရနှစ်ဦးစလုံး။ အတိုချုပ်။ ကျနော်တို့ကဒီသက်ရောက်မှုကိုဖယ်ရှားမယ့် device ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ...
စသည်တို့ကိုကောက်ပဲသီးနှံ, kropnutyh ကင်မရာ, ပေါ်သီးနှံများကိုရိုက်ချက်ကဘာလဲ?
ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖြတ်ထားသောကင်မရာအစရှိသည့် CROP ဆိုသည်မှာဘာလဲ။ Photoshop, mark (ဆိုလိုသည်မှာ mark1-mark4, pyadvak မဟုတ်ပါ) - သတင်းထောက်၏ကင်မရာသည်ပညာရှင်များအတွက်သီးသန့်ဖန်တီးထားသည်။ ထိုမိန်းမသည်ဖြန်း)))) ...
JPEG format မှဓာတ်ပုံများလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ
ငါတင်ပြချက်များပြီးဆုံးနှင့်၎င်းတို့အားဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ကယ်တင်မည်ဘယ်မှာ format တစ်ခု JPEB သို့ဘာသာပြန်ထားသောသင့်သနည်းဆိုပါက JPEG, format နဲ့ဓါတ်ပုံလွှဲပြောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံ ရှေ့မှာဘာ format နဲ့ကြည့် ...
လေးနက်သောမေးခွန်းတစ်ခုကို။ မည်သူမဆိုထိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ပေါင်းစပ် input ကိုအကြားခြားနားချက်ကိုသိပါသလော ပင်ပေါက်တစ်ပေါက်-သူတွေကိုတူညီတဲ့ရှိတယ် ...
အလေးအနက်မေးခွန်း။ တစ် ဦး ပေါင်းစပ် input ကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု input ကိုမှကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သူမဆိုသိလား? အဲဒီမှာတွင်းတူညီတဲ့တွင်းတွေတောင်ရှိတယ်။ ငါ5ရဲတွေထည့်မယ်။ Component Input Video အရည်အသွေးသည်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ တွင်းများ - သင်သိ,
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာစံအစီအစဉ်များအတွက်ပုံရိပ်တွေ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ပွင့်လင်းရုပ်ပုံ kalsikom zoom ကိုအတွက်စာနယ်ဇင်းပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်, ထိပ်မှာလက်ဝဲငှါ, Paint ကိုဖွင့်ပြီး Insert obezh မလိုအပ်သောအရွယ်အစားပြောင်း image ကို click လုပ် ...
အရာနှစျတှငျဓာတျပုံရှိခဲ့သလဲ သူ့တီထွင်မှုအသစ်တခုမီဒီယာကြော်ငြာနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းပိုစတာများ, Flyer နှင့်သတင်းစာကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းထားတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်၏ပထမဦးဆုံးပုံစံများကိုဘွားမြင်လေ၏။ လန်ဒန်မြို့ရှိ ...
ကင်မရာထဲမှာ ISO ကဘာလဲ? ရုပ်ရှင်၏ sensitivity နှင့်အတူတူပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံ (ယူအက်စ်) ၏ယူနစ်များတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှိုင်းယှဉ်မှုအရ၊ sensitivity ပိုမိုမြင့်မားခြင်း၊
ဉာဏ်အလင်းပွပါ -“6အတန်းအစားမှတ်ဉာဏ်ကဒ်” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ !
ဉာဏ်အလင်းပွပါ -“6အတန်းအစားမှတ်ဉာဏ်ကဒ်” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ! Secure Digital (SD) နှင့် Secure Digital HC (SDHC) ပုံစံများ၏မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များအတွက်မြန်နှုန်းစွမ်းရည် - အမြန်နှုန်း (SD ...
ဘာ HDR ပါသလဲ
HDR ကဘာလဲ။ http://blyg.livejournal.com/22444.html HDR သည်ဓာတ်ပုံပညာအတွက်အသစ်တစ်ခုနှင့်မကြာသေးမီကဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်သာမာန်ပုံများမှပင်လှပသောဓါတ်ပုံများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ HDR ...
ဒါကဓာတ်ပုံကိုသူ့ဟာသူသူ့ဟာသူ inverting ရှေ့ကင်မရာ, မှန်သို့မဟုတ်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်မိမိကိုမိမိကိုယ်တော်တိုင်၏ဓာတ်ပုံများကို selfie အရာဖြစ်တယ်။ Crossbow ။ မေတ္တာတော်ကိုသိမှမဟုတ်ဒီအအပြစ်မဲ့မိန်းကလေးတစ်! ) ...
ဘယ်လို fotkatsya မှငါ့ကိုပြောပြပါ ..
ငါ့ကိုပုံတစ်ပုံကိုမည်သို့ရိုက်ရမည်ကိုပြောပါ .. မတင်းမာပါနှင့်, အဓိကအရာ! GOST 32843-2004 "မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသေးအဖွဲဓာတ်ပုံများနှင့်သေးငယ်သောခြံများနှင့်လူမှုရေးအသေးများအတွက်" နှင့်မကိုက်ညီပါ။ GOST မှကောက်နုတ်ချက် - 2.6 ။ ပုံစံက ...
ငါ Photoshop ကိုထက်အခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုပြောပြ, သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာမှာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ချင် ...
ဓာတ်ပုံကိုမျက်မှန်တပ်ပြီးပရိုဂရမ်ကိုပြောပြပါ။ Photoshop မှအပကျွန်ုပ်၏အဖြေကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။ http://otvet.mail.ru/question/55959991/ Gimp, paint ။ စူပါဂူလုပ်ငန်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ငါမသိဘူး ....
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,304 စက္ကန့်ကျော် Generate ။